BBL Lumbar Molder Back Compression Lipo Board Lipo Lumbar Molder Back Board BBL na-enye Lipo Foam Lumbar Molder Board Compression Flattening AB Lipo Board, Iberibe 3
Ihe ị na-enweta: ngwugwu na-abịa na 1 mpempe lipo lumbar molder backboard, 1 mpempe lipo foam lumbar molder board na 1 ibe mkpakọ flattening AB lipo osisi, ezigbo ngwakọta na-enyekwu nrụgide na afọ gị na azụ, na-enyere gị aka mma. na-akpụzi ma nweta akụkụ eriri afọ na azụ mara mma
· Ihe dị nro: bọọdụ ụfụfụ lipo lumbar anyị bụ nke ihe dị nro, nke na-adịghị mfe ịmegharị, ma na-enye gị nkasi obi dị mkpa ka ị nọgide na-eme ihe kwa ụbọchị.
Nkọwa nha: BBL anyị na-enye ihe ruru ihe ruru.12.2 x 9.1 x 0.4 inch, 12.8 x 11.8 x 0.2 inch na 8.7 x 5.1 x 0.06 inch, nke dị mfe ma dị gịrịgịrị, dị mfe iji ma zere ihere, ma ị nwere ike iburu ha gburugburu.
· Nhazi a na-adịghị ahụ anya: enwere ike itinye onye na-akpụ akpụ lumbar na akwa uwe, ọ ga-agakwa na-adịghị ahụ anya n'okpuru;Ị nwere ike iyi uwe kachasị amasị gị ka ị na-enwe mmetụta dị mma nke BBL backboard lipo bbl combo
· Ọtụtụ ọrụ: bọọdụ na-akpụ akpụ nwere ezigbo ngbanwe, nke nwere ike inye nkwado siri ike na-ahapụghị akara n'úkwù gị na azụ, nyere gị aka belata ọzịza ma gbochie njigide mmiri na mpaghara azụ dị ala.
bọọdụ akpụkpụ lumbar anyị na bọọdụ nhazi ime afọ AB agaghị ahapụ akara n'afọ na azụ gị, na-egbochi akpụkpọ ahụ gị ịhịa aka n'ahụ.
Bọọdụ akpụ akpụ anyị nwere ike igbochi ahụ erughị ala, ike ọgwụgwụ na ọnya n'ụkwụ, na iku ume ya na-enye gị ahụmihe iyi uwe dị mma.
Ojiji dabara adaba nke efere mkpakọ atọ a nwere ike ime ka akụkụ afọ gị na azụ gị dịkwuo mma, na-enyere gị aka imeta ọdịdị mara mma.
Enwere ike ịme ihe enyemaka BBL dị ka onyinye bara uru maka ezinụlọ gị na ndị enyi gị, na-enyere ha aka ịkwụsịlata ma wepụ ike ọgwụgwụ mgbe ọrụ ụbọchị gasịrị.
Agba: dị ka foto e gosiri
Nha: ihe ruru.12.2 x 9.1 x 0.4 inch, 12.8 x 11.8 x 0.2 inch na 8.7 x 5.1 x 0.06 inch
1 x Lipo lumbar molder azụ osisi
1 x Lipo foam lumbar ebu osisi
Ntụnye aka, biko kwe ka mperi mperi nha.
Agba nwere ike ịdị ntakịrị ihe dị iche n'ihi ngosipụta ihuenyo dị iche iche.
Nke gara aga: BBL Toilet Seat Riser, Brazil Butt Lift Toilet oche Riser, BBL oche oche ebuli elu Brazil Butt Lift (BBL) Ụlọ mposi oche - Enyemaka ụlọ ịsa ahụ maka mgbake ịwa ahụ.
Osote: Ngwa Medcore Lipo Foam Post Surgery Kit: 2 mbadamba ụfụfụ egbugbere ọnụ, 1 Lumbar Molder Back Compression Board, 2 mbadamba Ab – Liposuction, C-Section, tummy tucks, Brazil Butt Lifts
2 Iberibe Lipo Foam Back Board Lumbar Back ...